DEG DEG: Xafiiskii Hey’adda Sirdoonka Soomaaliya Ee NISA Oo la Jabsaday DAAWO SAWIRADA | Afrikada
DEG DEG: Xafiiskii Hey’adda Sirdoonka Soomaaliya Ee NISA Oo la Jabsaday DAAWO SAWIRADA
Jul 20, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Muqdisho: Taliye ku-xigeenka koowaad ee hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed Gen. Cabdalla Cabdalla Max’ed ayaa la sheegay in la jabsaday, iyadoo arrintana ay ku soo beegantay xilli khilaaf ba’an uu ka dhex aloosan yahay mas’uuliyiinta hey’addaas.
Wararka ayaa sheegaya in la burburiyey qalabkii Xafiiska iyo aqabkii yiilay, iyadoo dokumentiyadii ku jiray qaarkood la qaatay kuwo kalena xafiiskiisa dhexdiisa lagu daadiyey.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in falkan ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan NISA oo ka amar qaata agaasimaha hey’adda NISA Xuseen Cismaan Xuseen (Uurkuus) oo dalka ka maqan.
Xafiiska Taliye ku-xigeenka NISA Cabdalla Cabdalla oo ku dhex yaalla xarunta NISA ee Habar Khadiija loo yaqaan ayaa waxaa loo geystay fal ay saraakiisha NISA ku tilmaameen mid taariikhda Hay’adda ku cusub.
Talaabadan ayaa ku soo beegantay xili Agaasimaha Guud ee Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen uu maalmo ka hor shaqo joojin ku sameeyay labadiisa ku-xigeen ka dib khilaaf la sheegay inuu soo kala dhax galay.
Qoraal uu Isniintii ah soo soo saaray Xafiiska agaasimaha Hay’ada Nabad Sugida ayaa lagu cadeeyay in shaqada laga joojiyay ku-xigeenadiisa kala ah, Sareeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo Col. C/qaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaano Jaamac.